Halkee Ayuu Joogaa Antoine Griezmann Madaama Uu Diiday Inuu Ku Soo Laabto Tababarka Atletico Madrid? Muxuuse Qabanayaa? - Gool24.Net
Halkee Ayuu Joogaa Antoine Griezmann Madaama Uu Diiday Inuu Ku Soo Laabto Tababarka Atletico Madrid? Muxuuse Qabanayaa?
Ma ahan wax qarsoon in heshiiska saxiixa Antoine Griezman ee Barcelona iyo Atletico Madrid inuu isku bedelay colaad, iyadoo ciyaaryahanka uu diiday inuu soo xaadiro tababarka Atletico Madrid.
Haddii uusan joogin xarunta tababarka ee Los Angeles de San Rafael ee ku taala duleedka Madrid halkaasoo Atletico ay ku sugan tahay, halkee ayuu Griezmann joogaa?
Jariirada Isbaanishka ee Marca ayaa ogaatay in Griezmann uu joogo Spain isagoo sugaya in mustaqbalkiisa go’aan laga gaaro, waxa uu diiday inuu raaco diyaaradii Atletico u qaaday Mareykanka si la mid ah sidii uu sameeyay xagaayadii hore.
Griezmann ayaa weydiistay labada kooxood inay heshiis gaaraan sida ugu dhakhsiyaha badan, laakiin inta ay heshiis ka gaaraan waxa ay uu sameynayaa tababar u gooni ah si uu u dhismo taam ahaanshihiisa ka dib markii uu ka soo laabtay dalxiiskii uu ku joogay jasiirada Ibiza.
Waxa uu raacayaa tilmaamo gaar ah oo uu ku dhisayo taam ahaanshihiisa madaama uusan qeyb ka aheyn tababarka kooxda Atletico Madrid.
Clement Gautreau oo ah tababarihiisa qaaska ah ayaa la joogay xiddigii hore ee Real Sociedad xagaagan oo dhan, waxaana ay labada nin u wada shaqeynayaan si dhow ilaa iyo inta ay Barcelona iyo Atletico heshiis ka gaarayaan.
Waxaa la filayay in xiddiga reer France uu waqtigaan ka horba uu u wareego Barcelona, gaar ahaan iyadoo lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa ay si weyn hoos ugu dhacday markii la gaaray 1dii bishii July.